Archive du 20170822
Fanafihana Taksibrosy Ny tena zava-misy marina
Mihamahazo vahana hatrany ny fanafihan-jiolahy any amin’ny lalam-pirenena amin’izao fotoana izao.
Marc Ravalomanana Tena tian’ny olona any Avaratra
Mbola tena mamy hoditra amin’ny mponina amin’iny tapany avaratry ny nosy iny Andriamatoa Marc Ravalomanana, raha ny hita tao Antsiranana nandritra ny 4 andro sy ny zava-nitranga.
Fandravana ny zandarimariam-pirenena Tsipahin’ny CRAM
Naneho hevitra momba ny toe-javatra maro eto amin’ny firenena ny CRAM (Cercle de Refléxion pour l’Avénir de Madagascar).
Hetsiky ny mpanohitra Ho avy ny fisamborana
Hentitra ny avy ao amin’ny prefektioran’Antananarivo renivohitra fa tsy mahazo manao ilay fihetsiketsehana nokasaina hotanterahana ao amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ny Herin’ny Fanovana tarihan’i Doudou satria ahiana hiitatra amina fidinana an-dalambe izany;
Antoko Tiako I Madagasikara
Mihetsiketsika ny any Manjakandriana Velona sy miaina ny Tiako i Madagasikara manerana an’i Madagasikara, ary mipetraka hatrany anaty fokontany ny rafitry ny antoko. Ohatra iray azo tsapain-tanana ny rantsan’ny Antoko any amin’ny Kaominina Ambohidratrimo an’Ala,
Vahaolana amin’ny fidangam-bidin’ny PPN Nosantarina any Mahajanga ny “TSINJO”
Nanao fidinana ifotony tany Mahajanga ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana Tazafy Armand niaraka tamin’ny tale jeneralin’ny fanjifana sy ny fifaninanana Rakotomanga Soloalitiana omaly alatsinainy 21 aogositra.
Fanatanjahantena an-tsekoly 2017 Atleta 1209 no tonga any Mahanjanga
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny zoma 18 aogositra 2017 teo tao amin’ny kianja Rabemananjara Mahajanga ny hetsika fanatanjahantena an-tsekoly .
Basikety « Challenge Nationale 3x3 » Ny Fandrefiala sy Kingston no tompondaka
Nifarana tamin’ny alahady 20 aogositra teo tany Mahajanga ny fifaninanam-pirenena “Challenge National 3x3 2017”.
Tenisy Tompondakan’i Madagasikara Nahery indray ireo kalaza
Nifarana tanteraka tamin’ny lalao famarananan’ny « toutes catégories » notontosaina ny alahady 20 aogositra tetsy amin’ny « courts Acsa Ambohidahy » ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasiakara amin’ny taranja tenisy 2017.
Rugby tompondakan’Analamanga Nitohy tetsy amin’ny Malacam indray
Tsy mety misy fifanarahan-kevitra eo amin’ny disadisa misy eo amin’ny tontolon’ny baolina lavalava ankehitriny. Samy mbola mitana ny heviny hatrany ireo mpifanandrina izay tarihan’ny Malagasy Rugy an-daniny ary izay miaraka amin’ny Analamanga Rugby an-kilany.
Manary lalàna sy alalana
Veloma lava ve izany ny fampiharana araka ny tokony ho izy ny lalàna sy ny fanomezana alalana amina lafin-javatra maro eto amin’ity firenena ?
Tetezana any Fiadanana sy Mangasoavina Ankazobe
Hifanilihan’ny Faritra sy ny minisitera ny fanamboarana azy
Taom-baovao Malagasy iraisana Hotanterahina ny volana septambra ho avy io
Sambany no hotanterahina eto amintsika ilay hetsika taom-baovao Malagasy iraisana izay hiparitaka manerana ny faritra 22.
Faha-10 taonan’ny Tarika Zarah Hakotroka ny fankalazana
Ny hira ara-pilazantsara no hahafantaran’ny maro ny Tarika Zarah . Anarana notsoahina avy amin’ny hoe : « ZARAina ny Hafatra » ny hafatra io hoe « Zarah » io.
Teatra Malagasy - Tropy Jeannette Nodimandry i Mamy Rajaonarivelo mpisehatra fototra
Nodimandry tamin’ny alahady 20 aogositra teo amin’ny faha-45 taonany i Mamy Rajaonarivelo mpisehatra fototra lehilahy tao amin’ny Tropy Jeannette, izay tropy Teatraly zokiny indrindra eto Madagasikara satria niorina tamin’ny taona 1929.
Ambatondrazaka Mandeha ny aferana basy sy vola sandoka
Basy Kalachnikov miaraka amin’ny bala 24 no saron’ny zandary ao amin’ny tobim-paritra Ranofotsy kaominina Andilanatoby ny faramparan’ny herinandro teo.
Nahitana zazarano teny Bekiraro omaly tokony ho tamin’ny 12 ora antoandro. Tsy fantatra izay olona nanary azy io, ary heverina ho mety efa nesorina tao an-kibo andro vitsy na ora maro izy io vao nariana teny an-toerana.